Ahoana no hiafaran'ny A&C ??
Date: 20 juin 2017 - 09:19
Eny am-ponja ny tompony. Ahoana ny fitantanana A & C ? mibananaka be ? hotakian'ny Fanjakana averina ny vola ? mety hisy hanararaotra ve ?
- tsy ilaozana misy olombe manaraoraotra mampiasa chambre dia avy eo tsy mahaloa vola...
- tsy ilaozana mety tsy misy manao fety intsony ny salle de cérémonie (toy ny mariazy, lanonana samihafa, ...)
inona no fanafodiny???
Tokony ho tandrovna ny fiarovana ny A & C , satria efa volabé no lany tao...
omeo ny hevitrao!!
Re: Ahoana no hiafaran'ny A&C ??
Date: 20 juin 2017 - 10:59
Ko inona no hirarahina izany ,asaivo alain'ny fitsarana hamerenana ny volam-bahoaka @ izay tsisy olona hametsifetsy andry zareo kou,rehefa NANODY azy ny...
Date: 20 juin 2017 - 14:08
efa mba misy ezaka lalina kosa aloha ny eto amin'ny tanàna raha jerena amin'iny eee
inona ary no tiako ho lazaina ?
fa kosa nivadika ezaka hafa indray anefa ilay izy
marina fa efa nisy ihany tamin'ny 2009
fa tsy resaka trano na magazay ny resaka eto, fa io vatanao olombelona io no lasa solony
Date: 20 juin 2017 - 18:20
Aza matahotra ianareo momban'ny A/C,fa efa milamina ny amin'izany ,i Raclo no tsy hivezivezy ao intsony fa ny orinasa dia miodina foana satria nataony contrat location gerance ,dia arotsakay any amin'ny comptiny ny vola nifanarahina .
Efa nanaovanay OPA ihany izy fa tsy nety dia aleo handeha amin'izao .
Date: 20 juin 2017 - 20:10
Radiry<>mahay nareo an!
Par: gregoire V
Date: 23 juin 2017 - 09:11
hatao annexe antanimora ny eny e, ho betsaka manko ny mpitondra sy mpanambola hidoboka fa tsy ho faty irery kosa i madama. atao prison VIPny eny
Date: 23 juin 2017 - 10:07
- Tandremana mba tsy ho dorana ny A&C.
- Alain'ny Fitondrana ny trano sy ny momba azy
- Amidy atao lavanty (tolo-bidy iraisam-pirenena)
- Ny tany tsy an'ny vahiny fa ny amboniny ihany, raha vahiny no mahazo azy. Ny tany an'ny Malagasy
- Mizara roa ny vola azo : ampahany voalohany dia omena ireo tompon-tany teo satria "noterena" ry zareo hivarotra ny taniny (varo-boba), ary ny ampahany faharoa any amin'ny Trésor ho vola hampandrosoana ny Firenena.
Date: 23 juin 2017 - 10:28
Ndrao diso hevitra fa miodina tsara ny fitantanana ny A&C, misy oul ef mpitantana atrizay aho fa tsy Claudine mitsy no nitantana an'io mivantana. Manana ny mpiasany izy afaka mampiodina an'io, anisan'izany ny rain-janany.
Date: 23 juin 2017 - 11:48
ny fahitako azy dia ohatra tsy ankafizin'ny vahiny (vazaha) loatra io tranobé io, satria tsy mifanaraka amin'ny ilàny azy an (design, style, architecte, ...)
Date: 23 juin 2017 - 11:54
maninn raha omena ny Airmad hahafahany mi-heberger voyageurs rhf misy retard ny vols, ohatra ?
- misy kou ireo malagasy mipetraka any anindrana mila trano hialofana vetivety mandrapa !!!
>> betsaka no azon-tsika malagasy ampesaina an'io fa fadio ity mivarobarotra ity rey olona aaa !!!
Date: 23 juin 2017 - 14:20
Misy mpitia io ka. Na tompon-tany na vahiny.
Ka na misy mpitantana ao na tsia, tsy izay no olana fa ny fakana an'io hamerenana ny volam-panjakana.
Koa raha te-hampihatra ny tany tan-dalàna, dia atao saisie ary amidy.
Fa aza manao hevi-dravina toa an-dry Belapin.